गाईपूराँण ( एकपटक पढ्नै पर्ने गौमाताको कथा ) भाग- २ | कृषि डेली
गाईपूराँण ( एकपटक पढ्नै पर्ने गौमाताको कथा ) भाग- २
-कृषि डेली	 -७ पुष २०७५, शनिबार ०३:३७
गाईपालन संगितको भाषामा साधना हो, धर्मको भाषामा तपस्या, वैज्ञानिक भाषामा निरन्तरको मिहिनेत, र व्यवसायको भाषामा उद्योग हो । सजिलो पक्कै छैन तर असम्भव पनि हैन । गाईपालन फोस्रो बोक्रे ज्ञान बोकेका डिग्री होल्डरको क्षमताको काम होइन न त कायरहरुले आँट्न सक्ने व्यवसाय नै हो । यो गाह्रो अवश्य छ तर यसले दिने सफलता पनि आँक्न सजिलो छैन । तपस्या गर्दा जस्तै गाईपालन गर्दा पनि केहि विधि पूरा गर्नु पर्दछ जसको बारेमा गाईपुराँणमा श्रीकृष्णको आज्ञाले विस्तृत वर्णन गरिएको छ ।
गाईपालन व्यवसाय भनेको कहिले पनि बजार नघट्ने व्यवसाय हो । बजारको माग बुझेर समयमा र सही ठाउँमा सहित तरिकाले उचित लगानि गर्न सकेमा यसबाट मनग्य फाइदा लिन सकिन्छ । गाईपालन व्यवसाय एक उद्योग हो । जसरी एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले उद्योग स्थापना गर्नुको उद्देश्य, उद्योगले उत्पादन गर्ने सामाग्री, सामानको बजारीकरण, गुणस्तर, कामदार, फोहोर व्यवस्थापन, कच्चा सामाग्रीको अध्ययन, सुलभता, बीमा र दिर्घकालिन रणनीति तय गर्दछौँ ठीक त्यसै गरी गाईपालन व्यवसाय सुरुवात गर्नुपूर्व पनि निम्न कुरामा ध्यान पुर्याउन पर्दछ ।
 गाईपालनगर्नको लागि दृण इच्छाशक्ति र कारणबारे प्रष्ट हुनुपर्दछ ।
 गाईपालनव्यबसायीसँगको कुराकानी र गाई फार्मको अवलोकन तथा अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
 अवलोकन र अध्ययन पश्चात्बजार अध्ययन गर्नु पर्दछ ।
 सो क्षेत्रमा उपलव्ध दाना, घाँस वितरकको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
 आफ्नो लगानी गर्न सक्ने क्षमताको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
 क्षमताअनुसार गाईपालन गर्ने लक्ष्यबनाई विज्ञसँग छलफल गर्नु पर्दछ ।
 संभव भएसम्म तालिम वा गोष्टीहरुमा सहभागि भई जानकारी लिनुपर्दछ ।
 गाईपालनगर्नको लागि भावी कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ ।
 कार्ययोजनाअनुरुप सकभर कोरली बाच्छीबाट गाईपालन व्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्दछ ।
 उन्नतनश्लको दुध उत्पादन क्षमता राम्रो भएका गाई जस्तै होलस्टेन, ब्राउन स्वीस प्रजातीका गाई पालन गर्नु फाईदाजनक हुन्छ । त्यसै अनुसारका जात छान्नुहोस ।
 विशिषज्ञसँग परामर्श गरी वार्षिक रुपमा आउने खर्च विवरण सुरक्षित राख्नुहोस र सोही अनुरुप भएनभएको जाँच गर्नुहोस् ।
 सुरुवातमै महँगो र खर्चिलो गोठ बनाएर मात्रै सफल किसान बन्ने भन्ने होइन । बरु आफ्नो क्षमता अनुसारको व्यवसाय सुरुवात गरी त्यसबाट आएको आम्दानीलाई नै लगानी बनाएर अघि बढ्दा दिर्घकालिन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
 वर्ष दिनसम्म खुवाउने घाँस वा साईलेजको पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कामदारलाई सहमतिबाट उनीहरुलाई पनि अनुकुलहुने र फार्मको काम पनि यथावत चालु रहने किसिमले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
 कामदारको भावना अनुरुप व्यवस्थापन भएमा कामदारको समस्या हुँदैन ।
 हरेक हप्ता आफ्नो फार्मको पूरा विवरण सुक्ष्म ढङगले विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सुधार गर्नु पर्दछ ।
 गाईपालन व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा सञ्चालनगर्न गाईले के सोच्छ ? कस्तो महशुस गर्छ ? के मिठो मान्छ ? जस्ता प्रश्नको गाईकै स्थानमा आफुलाई राखेर जवाफ खोज्यो र सो अनुसार कार्य गरेमा अवश्य सफल होइन ।
अथः द्धितिय अध्याय समाम्त
बी.भी.एस्सी. एण्ड ए.एच.
( भण्डारी यात्रीमदन कृषि डेलिका स्तम्भकार हुन ।)
पुष ७ गतेकाे तरकारीकाे मूल्य हेर्नुहाेस
पशुपक्षीको दानामा मित्रुजीवनाषक औषधि भेटियाे